Izahlulo: IINTLOBO, IZAHLUKO, ZENZIWA NJANI? KUNYE OKUNINZI
Ukwahlulwa: Iindidi, iinxalenye, zenziwa njani? nokunye okuninzi
Las izahlulo zinokuvela zibe nzima kancinci ukusebenza kwezibalo xa sifunda; kodwa, inyani kukuba kubalulekile ukuba siyazi indlela yokwenza ngokuchanekileyo, kuba le misebenzi siyisebenzisa yonke imihla. Ke ngoko, apha siza kuchaza yonke into ekufuneka uyazi malunga nabo.
1 Yintoni ukwahlula?
2 Icandelo lesahlulo
3 Ulwahlulo lwenombolo enye
4 Amacandelo amabini namathathu
5 Ulwahlulo lwamaqhezu
5.2 Gcina kwaye wande
Phambi kokuba sifunde ukwahlulahlula, kufuneka sazi ukuba xa sithetha ngokwahlulahlula, asibhekiseli ekwahluleni izinto okanye izinto ezilinganayo.
Umzekelo: ukuba sinebhaskithi enama-apile alishumi (10), kwaye sifuna ukwahlulahlule kwiibhaskithi ezimbini (2) eziqulathe inani elifanayo lama-apile; Siwahlula njani ii-apile ?; Kulula kakhulu, sibeka ama-apile amahlanu (5) kwibhaskithi enye kunye nama-apile amahlanu kwenye, kungoko sinee-apile ezili-10 kwiibhaskithi ezi-2.
Sele siyazi ukuba sithetha ntoni xa sithetha ngokwahlulahlula; Kodwa, ngoku kubalulekile ukuba siyazi into eyenziwa yi iinxalenye zesahlulo, Masibone:
Isahlulo: sisixa esiza kusaba; Ukuthatha umzekelo odlulileyo, le iya kuba ziiapile ezilishumi.
Divisor: ngoku sinomfanekiso esizahlulahlulahlulahlulahlulahlulayo; Ngamanye amagama, iinxalenye esiza kuzabahambisa kuzo izinto. Kule meko, ibiya kuba ziibhasikiti ezimbini.
Quotient: le yimveliso yolwahlulo; ukuba kumzekelo wama-apile kunye neebhasikithi, iyakuba ntlanu; Oko kukuthi, sibeka ii-apile ezintlanu kwingobozi enye, saza esinye safaka ama-apile amahlanu kwenye.
Phumla: kwezinye iimeko, kuyakubakho inani eligqithisileyo, isixa esingenakusahlulwa; eya kuba yeyokuphumla. Eli nani lingaba ngu-zero (0) okanye enye, kodwa kufuneka ihlale ingaphantsi kwesahluleli; kwimeko yethu, intsalela ayi-zero, kuba sikwazile ukuhambisa zonke ii-apile ngokwanelisayo.
Ulwahlulo lwenombolo enye
Kulungile, ngoku masibone indlela yokwahlulahlula; Siza kuqala ngokwahlula-hlula ngenani elinye kwisahlukanisi; Masibone inkqubo, sithatha i-125 ngo-5 njengomzekelo.
Into yokuqala ekufuneka yenziwe kukwazi ukuba mangaphi amanani esahlulelweyo esiya kuwathatha ukwahlulahlulahluli; inani lokwahlula-hlula esilithathayo, kufuneka lihlale lilingana okanye inkulu kune ukwahlula. Ke ngoko, kumzekelo we-125, asizukuqala ukwahlula ngokuthatha u-1, kuba lento ingaphantsi ko-5; masithathe nenombolo elandelayo, esishiya nenani le-12.
Into elandelayo esiza kuyenza kukujonga inani eliza kuthi, xa liphindaphindwe ngesahluli, liphumele kwisahlulo; Ukuba akukho, siza kuthatha esona siphumo siphantsi sisondeleyo kwisahlulo kwaye sibasuse. Kumzekelo wethu, siphinda-phinda u-5 x 2, onika u-10; ngokukhupha u-12 - 10, siya kuba no-2.
Ngoku, siza kuthoba inani elilandelayo lokwahlulahlula, kwaye siza kwenza inyathelo langaphambili kwakhona. Ke, ukuba besike sahlala no-2 sathoba u-5, kuyakufuneka sijonge inani elizakuthi xa liphindaphindwe ngo-5 lisinike u-25; Kule meko ingaba ngu-5, ngoko ke 25 - 25 = 0; Ukusukela ukusebenza kwangaphambili kunike u-0, akusekho manani okwahlulahlulwa, ngoko ke sithi u-125 ÷ 5 = 25, kuba siqala ngokuphinda-phinda isi-5 ngesi-2 emva koko ngesi-5.
Amacandelo amabini namathathu
Ukwahlulahlula ngamanani amabini anesithathu kwisahlukanisi kunokubonakala ngathi ngumsebenzi onzima ukuwenza; Kodwa inyani yeyokuba inkqubo iyakufana nakumahlulo enani elinye, kuphela siyakuthatha amanani amaninzi kwisahlulo njengoko kufunwa ngumhlukanisi; Masibone ngomzekelo:
Ukuba ufuna ukwahlula i-5738 ukuya kuma-73, kuya kufuneka uthathe ixabiso elilinganayo okanye elingaphezulu kwesahluli kwaye kule meko i-57 ingaphantsi kwama-73; masithathe ama-573 njengamanani okuqala.
Ngoku, sizakujonga inani xa liphindaphindwe ngo-73 lisinika u-573 okanye ngaphantsi, kulento iyakuba ngu7; emva koko 73 x 7 = 511, ngoko ke 573 - 511 = 62.
Into elandelayo esiza kuyenza kukuthoba inani u-8, ke siyakuba no-628- 73; ngoku siyayiphinda le nkqubo, sijonga ukuphinda-phinda kwama-73 angaphantsi okanye alingana no-628, anokuba ngu-8 kwaye sino-73 x 8 = 584; Ke sithathe 628 - 584 = 44.
Njengoko sibona, akusekho manani okunciphisa isahlulo; Ke sinama-78 ashiyekileyo ngenxa yokusebenza kwethu kwaye angama-44 aseleyo.
Makhe siphakamise kancinci kwaye sifunde indlela yokwenza ulwahlulo lwamaqhezu; Akukho nto yoyikayo, ukuba uhoya ezi ndlela zimbini siza kukufundisa zona, uya kuyenza ngokuqhwanyaza kweliso; Masibone:
Sisebenzisa le ndlela, siza kuthatha inani elingezantsi leqhezu lokuqala size siliphindaphinde ngedinomineyitha yesibini; esikushiyileyo, siza kukubeka njengenombolo. Emva koko, sizakuphindaphinda inani elilinganiswe ngokulinganayo kwinani lesibini; Isiphumo siya kuba sesingaphantsi kwaye senze lula iqhekeza elishiyekileyo. Masibone umzekelo:
Ukuba sino-4/8 ÷ 8/12, sizakuphindaphinda inani elingaphezulu kwelokuqala (4) ngumonyuli wecandelo lesibini (12); 4 x 12 = 48, Engahlala njengenani leqhezu lokugqibela.
Ngoku, kufuneka siphindaphinde inani elingaphezulu kwinxalenye yokuqala (8) ngenani elisecaleni lesibini (8); ishiya 8 x 8 = 64, idinomineyitha yeqhezu lokugqibela.
Iqhezu lethu liyakuhlala ngama-48/64; kodwa, kufuneka siyenze lula kangangoko kunokwenzeka, kwaye kule meko, imveliso yokugqibela iya kuba ngu-3/4.
Gcina kwaye wande
Kulungile, kule meko into esiza kuyenza kukuthatha iqhezu lesibini kwaye silityale; okanye yintoni enye, sizakuthatha idinomineyitha kwaye siyiguqule kwinani, kwaye sibeke inani elingezantsi endaweni yedinomineyitha. Ngoku, siza kwenza lula naliphi na idinomineyitha ngayo nayiphi na inombolo kwaye siphindaphinde kwi-intanethi; masibone ngomzekelo:
Ukwahlula i-12/5 ukuya ku-6/4, into yokuqala esiyenzayo kukuguqula iqhezu lesibini, ukuze ibe ngu-4/6.
Emva koko, siqhubeka nokwenza lula amanani ngamanani; ukuba iinomboro zethu zezi: 12 = 2 x 2 x 3 kunye 4 = 2 x 2 kunye needinomineyitha zethu 5 = 5 kunye 6 = 2 x 3; kunokwenzeka ukuba kube lula ukubala ngenani kunye nedinomineyitha, kusishiya 2 x 2 x 2/5.
Ngoku, siza kwenza ukuphindaphinda kwi-intanethi kwe-2 x 2 x 2/5; Ukusuka kule nkqubo siza kuba no-8/5 njengeqhezu lokugqibela.
Siyathemba ukuba eli nqaku likuncede ukuba ufunde indlela yokwahlulahlula; Ngokunjalo, kuba khange siyichaze, apha sikushiya ividiyo apho bachaza indlela yokwahlulahlula ngamanani amathathu.
Sicebisa ukuba ungayishiyi ibhlog yethu ngaphandle kokubona inqaku lethu malunga nokuba zithini amanani endalo.
Yenza lula amaqhezu: Funda ngamanyathelo ambalwa
Iinombolo zendalo: zithini? iimpawu, kunye nokunye